Fatiyaa Awwal: &apos;Warri diyaaspooraa biyyasaaniif maal gochuun akka qaban ofi haa gaafatan&apos; - BBC News Afaan Oromoo
Fatiyaa Awwal: &apos;Warri diyaaspooraa biyyasaaniif maal gochuun akka qaban ofi haa gaafatan&apos;
&apos;Haadha Oromoota Somaaleerraa buqqaafamanii&apos;
Icciitii milkaa&apos;inaa dubartoota dureeyyii Ameerikaa
&apos;Komiin Ministeera Galiiwwaniitti Oromoon aangoorratti heddummaate jedhu soba&apos;
&apos;&apos;Sochiin walabummaa sun eegalee, OMN yeroo hundeeffame, Jarman keessatti yeroo jalqabaatiif uummata walitti qabnee OMN akka ijaaramu waan guddaa hojjenne.
Ana qofa osoo hin taane garee kiyya waliin hojjenne&apos;&apos; jechuun hundeefama OMN bara 2014 keessaa gahee guddaa qabaachuu nutti himte.
&apos;&apos;Qabsoo biyya keessatti gaggeefamaa ture maallaqa walitti guuruun deeggaruu, rakkoo ummata keenyaa miidiyaarratti ifatti dubbachuu, Jarmanootaaf rakkoo biyyaarratti hubannoo kennuu, baqattootaaf Afaan hiikuufi jajjabeessuurratti fi dhimmoota akka kanaa hundarraa hin hafuu,&apos;&apos; jetti.
Ji&apos;a tokko dura jila lammiilee Jarmanii qabachuun gara Oromiyaa imaltee, jiruuf jireenya uummata Oromoo akkasumas aadaa fi duudhaa saba Oromoo waliin waal barsiifteetti.
Bakka dhaloota abbaa ishee kan ta&apos;e Godina Baalee keessattis manneen barnootaaf meeshaalee barnootaa gummaachuun, namoota qabsoo uummatichaa keessatti gahee addaa qaban huccuu itti uffisuun jajjabeessiteetti.
Hojiileen hanga amma hojjette kunniin akka galaana guddaa keessaa bishaan faldhaanan waraabuuti jechuun gummachi taasifte xiqqaa ta&apos;uu ibsiti.
&apos;&apos;Amma boqonnaan tokko cufamee, boqonnaa biroon banameera&apos;&apos;
Aadde Fatiyaa Awwal, hojiilee biyyaa alaa fi biyya keessatti hojjechaa turte dhaabbata gargaarsaa jabaa seera qabeessa ta&apos;e tokko ijaaruun cimsuun barbaachisaa dha jettee amanuun dhaabbata F.A.S AID jedhamu hundeessiteetti.
&apos;&apos;Qabsoo Oromoorratti qeerroon lubbuu isaa itti gabbaraa, nuti warri diyaaspooraa ammoo maallaqaa fi sagalee uummataa addunyaaf dhageessisuun gahee guddaa baane.
Amma boqonnaan sun cufame kan itti aanuu akkamitti uummata keenya rakkina keessaa baafan kan jedhudha.&apos;&apos;
&apos;&apos;Kanas akka qabsoottin ilaala kan jettu aadde Fatiyaan rakkoo uummataa bifa qindaayeen hiikuu kaayyeffachuun dhaabbata kana hundeessuu dubbatti.
&apos;&apos;Dhaabbata galmaahe yoo ta&apos;e warri faranjiis amantaa qabaachuun hojii hawaasaa kana deeggaruu danda&apos;u nutiis, waan hunda qabataman hojjechuufi agarsiisuu dandeenyaa&apos;&apos; jetti.
Aadde Fatiyaan karoorri guddaa dhaabbatni ishee fi Abbaan warraa ishee hundeessan qabate uummata, keessaahuu dargaggoota dammaqsuu ta&apos;uu dubbatti.
&apos;Kaayyoon kiyya jiruufi jireenya Oromoo walaloon ibsuudha&apos;
&apos;Namni yeroo jalqabaaf Ameerikaatti fiilmii Afaan Oromoo hojjate ana&apos;
&apos;Ani Qabballe Duubaati. Booranillee Qabballe Duubaa qaba&apos;
&apos;&apos;Uummatni ofii mootummaa osoo hin eegiin biyya ofii guddifachuu qaba. uummatichi qabeenya qabu baree akka itti fayyadamuu danda&apos;urratti dammaqsuu feena.&apos;&apos;
Ji&apos;a tokko dura jila lammiilee Jarmanii qabatanii gara Oromiyaa imalanii kan turan aadde Fatiyaan lammiileen Jarmanii kunniin dargaggoota muuxannoo qaban baatii jahaaf gara biyyaa eerguun leenjii oogummaafi muuxanno qooduuf waadaa galaniiru jetti.
&apos;&apos;Biyya sanaaf maal goonaaf kan jedhu haa yaadnu&apos;&apos;
&apos;&apos;Qarshiin biyyoota Awroopppa keessatti argatan gahaa ta&apos;uu dhiisuu malus, mana barumsaa itti baratanii darbaniif waan daastaruma bituun waan guddaadha sanumallee gachuu hin dadhabanii&apos;&apos; jetti.
Hojiilee biiznaasa ammaa amma bilisummaa argameen hojjechuun caalatti bu&apos;aa hawaasaafi biyyaaf buusuu danda&apos;an sammuu keessa kaawwachuu qabuu jechuuniis dhaamti.
&apos;&apos;Osoon Oromoo ta&apos;ee isin wajjinin qabsaa&apos;a ture&apos;&apos;
Adde Fatiyaan hakiima lammii Jarmanii Dr. Shoobaart jedhaman waliin bultii ijaartee daa&apos;imman isaanii lama waliin jiratti.
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda&apos;u
Aadde Fatiya Awwal &apos;&apos;Warri diyaasporaa biyya biyya koof maal haa godhuuf jedhaa&apos;&apos; jetti
Aadaafi duudhaa Oromoof kabaja nama qaban ta&apos;uu kan dubbattu Fatiyaan, &apos;&apos;Osoon Oromoo ta&apos;ee dhaladhee isin waliin qabsa&apos;ee natti tola&apos;&apos; jedha Abbaan warraa ishee.
Guyyaan itti gaddite ammoo Irreecha bara 2016 irratti wayita uummatni ajjeefame ta&apos;uuf gaddi sun amallee akka itti dhagaahamu dubbatti.
Marsabiit, Keenyaa: &apos;Ani Qabballe Duubaati. Booranillee Qabballe Duubaa qaba&apos;
Adaanach Abeebee: &apos;Komiin Ministeera Galiiwwaniitti Oromoon aangoorratti heddummaate jedhu soba&apos;
Soorettii Kadir: &apos;Kaayyoon kiyya jiruufi jireenya Oromoo walaloon ibsuudha&apos;
Maammituu Makuriyaa: Bu&apos;aan koo boqonnaa sammuuti